McKnight Artist Fellow Grants Xeerarka Brandada
Boggan wuxuu bixiyaa hagid loogu talagalay isgaadhsiinta dadwaynaha ee ku saabsan barnaamijka McKnight Artist Fellowships, ee dhammaan wada-hawlgalayaasha si ay u caawiyaan horumarinta barnaamijka.
Haddii aan si kale loo sheegin, dhammaan macluumaadka waxay khuseeyaan labada xaaladood ee daabacaadda iyo kuwa digital ah.
Magaca barnaamijka ugu sareeya, barnaamijka dalladda ee lagu magacaabo McKnight waa Barnaamijka Macmiilka ee McKnight Artist. (Ka dib marka ugu horeysa ee lagu sheego macnaha guud, waxaad xor u noqotaa inaad soo gaabiso "barnaamijka isqorista" ama si fudud "barnaamijka.") Wada-hawlgalayaasha barnaamijka, laftooda, waxay maamulaan isudiyaarin anshax-khaas ah, kuwaas oo si wadajir ah u sameeya barnaamijka barnaamijka isboortiga.
Markaad tixraacayso barnaamijka, iska ilaali:
gaaban sida MAFP, MFP, iwm .;
kala-duwanaanta sida McKnight Fellowships, McKnight Grants Grant Artist, iwm .; ama
qalabyada leh magacyo kale, sida Benson Gallery / McKnight Fellowships, iwm.
Iskaashi shakhsi ahaaneed, edeb daro
Marka la tilmaamo ciqaabta hal abuurka ah (isticmaalka koowaad), shakhsiyaadka shakhsi ahaaneed ama saaxiibada ayaa loo gudbiyaa sida soo socota:
McKnight Fellowships for Farshaxanada Farshaxanka, Farshaxanka, Farshaxanada, Qoob-cayaaraha, Warfaafinta Warbaahinta, Muusikada, Diyaargarowrka, Farshaxan Masraxiyeyaasha, Farshaxanada Sawirrada, ama Qorayaasha
McKnight Farshaxanka Farshaxanka, Farshaxanka, Farshaxanka, Farshaxanka, Warfaafinta Warbaahinta, Muusikada, Diidmada Cilmiga, Masraxa Farshaxan, Sawir Sawir, ama Qoraa Isafgarad ama saaxiibo
McKnight Fellowship ama Fellowship Xirfadaha, Farshaxanka, Qoob-ka-ciyaarka, Qoob-ka-ciyaarka, Farshaxanka Warbaahinta, Muusikada, Cilmi-baarista, Tiyaatarka, Farshaxanka Farshaxanka, ama Qorista
Xarunta Cowleed waxay maamushaa Macaashka McKnight ee qoob-ka-cayaarka.
Carson Kreitzer waa Agaasimihii Macalinka McKnight 2015.
Sheryl McRoberts waxay heshay 2016-ka McKnight Fellowship ee Ceramics.
Marka la daabaco iyo internetka, adeegso calaamadda rasmiga ee dhammaan isgaarsiinta xiriirka la leh.
Calaamaddu waxay ku jirtaa noocyo badan (qaabab fayl ah iyo midabyo iyo ikhtiyaari daahfureed) si loogu oggolaado qaabeynta jajabnaanta. Soo qaado faylka la fureen oo ay ku jiraan xulashooyinka calaamadaha hadda jira.
Ha isticmaalin shaashad-qabashada ama is-beddelka saamiga ama midabada faylasha sawir-qoraalka. Mashruucyada daabacan, calaamadda isbahaysiga ah ku qor calaamada hore ama bogga hore (ku xiran nooca) dhammaan qalabyada la xidhiidha.
Xusuuso in calaamadahani yihiin kuwo aan la wareejin karin. Waxay u adeegsadeen isticmaalka gaarka ah ee barnaamijyada is wehelinta, iyo inaan loo gudbin ama loo isticmaalin dadka kale.
Taabashada midabka Color
Code Hex E7E8DF C8102E 231F20
PMS la'aan Pantone 9081U Cream Pantone 186U Red Madow
PMS daadsan Pantone 9081C Cream Pantone 186C Red Madow
FIIRO GAAR AH: Waxaa jira calaamad kale oo qaas ah oo loogu talagalay farshaxan farabadan.
Shabakadaha Iskaashatada waxaa si habboon loo qorsheeyey si ay u muujiyaan astaanta ururka. Xaaladdaas oo kale, tilmaamahan soo socda ayaa la bixiyaa si loo dhiso hab joogto ah oo loogu talagalay isgaarsiinta xiriirka la leh:
Dhammaan bogagga interneetka ah waxaa ku jira bog gaar ah oo loogu talagalay macluumaadka isqaba. McKnight wuxuu boggan ku soo lifaaqi doonaa boggeena.
Websaytka xiriirka la leh oo si toos ah u muuqda ayaa si cad u muujinaya calaamadda rasmiga ah, gudaha saddexda sare ee bogga
macluumaadka ku saabsan habka codsiga, oo ay ku jirto xaq u yeelashada, waqtiga kama dambaysta ah, iwm.
la xariir macluumaadka maamulaha isboortiga
xaaladda hadda ee codsiga (furan ama xiran)
ogeysiisyada la xiriira
Websayt kasta oo lamaanuhu wuxuu bixiyaa badhanka bogga ee muuqaalka ah ama xiriirka menu-ka ee ku saabsan boggaga xiriirka la leh; Fikrad ahaan, goobta navigation waxay u oggolaaneysaa si sahal ah oo sahlan oo loo gaarsiin karo bogga kasta ee bogga.
Bogga xiriirka lamaanaha ee xiriirka la leh waxa kale oo ka mid ah isku xirka cinwaanka jiifka ee loogu talagalay asxaabta farshaxanka, kor ku xusan.
Wararka & Warbaahinta Bulshada
McKnight oo ah wargeysyo isdhaafsi ah oo ku saabsan wada-xaajoodka www.mcknight.org/artistfellowships.
Muddo laba toddobaad gudahood ah oo la kala dooranayo, lammaaneyaasha waxay ku dhajinayaan ku dhawaaqida abaal-marinta in McKnight ay ku xiran tahay. Marka qaabkani u oggolaado, McKnight wuxuu codsanayaa fursad uu ku soo gudbiyo xigasho si loo soo saaro liiska xulashada lamaane kasta. Sidoo kale, fadlan ku dar luqadda qalqaarka McKnight dhamaadka dhammaan xafladaha ku saabsan xiriirka la leh ee la xidhiidha.
McKnight sidoo kale wuxuu kor u qaadaa wararka iyo ogeysiisyada iyadoo la adeegsanayo warbaahinta bulshada, wuxuuna tixgelin doonaa siyaabooyin gaar ah (sida isdags) si loo kordhiyo istaraatiijiyadayada barnaamijka isqorista.
Xaaladaha u baahan luuqada ku saabsan barnaamijka isweydaarsiyada guud ahaan ama Maktabadda McKnight, sida wargeysyada, ogeysiisyada, ama boggaga internetka, fadlan isticmaal khaanadaha soo socda ee horay loo ansixiyay, oo ay weheliyaan luuqad ay samaysay ururkiina.
Wadajirka kulleeyaha (cusbooneysiiyay Janaayo 2021)
Waxaa lagu aasaasay aaminsanaanta in Minnesota ay baraarto marka fannaaniintoodu ay barwaaqoobaan, barnaamijka farshaxanka ee 'McKnight Foundation' waa mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn uguna weyn dalka. Taageerada shaqsiyaadka fanaaniinta ah ee u shaqeeya Minnesota waxay aas aas u ahayd barnaamijka tan iyo markii la bilaabay 1982. Barnaamijka McKnight Artist Fellowship Program wuxuu bixiyaa abaalmarin lacageed oo sanadle ah, oo aan xadidnayn farshaxan-yahanada heer-dhexaadka ah ee heer-sare ee Minnesota ee 14 farsamooyin hal abuur leh oo kala duwan. Ururada iskaashatada barnaamijka waxay maamulaan is weheshada waxayna qaabeeyaan si ay uga jawaabaan caqabadaha gaarka ah ee anshaxyada kala duwan. Waqtigan xaadirka ah aasaasku wuxuu ku deeqayaa $2.8 milyan sanadkiiba marka loo eego wadashaqeynta gobolka. Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo mcknight.org/artistfellowships.
Qalabka boodhka ee 'McKnight'
Arleta Little, Sarkaalka Barnaamijka iyo Agaasimaha Xiriirka Fanka, alittle@mcknight.org
Molly Miles, Sheekada Dijital ah, mmiles@mcknight.org